Tiigso – Faallo
FAALLO: DOORASHO KA DHACDA SOOMAALIYA 2016
Tiigso.com November 28, 2015 0
Waxaa la sheegaa in doorasho gole shacab iyo mid madaxnimo ka dhici doonaan Soomaaliya sannadka 2016. Laakiin lama hubo inay dhacayso iyo sida ay u dhacayso, haddayba dhacdo. waxaynnu ognahay inayan hore Soomaaliya uga
SOOMAALIYA IYO DOORASHO XOR AH OO XALAAL AH 2015?
Tiigso.com August 5, 2015 0
Sidaan hore ugu sheegney qoraalkayagii hore oo cinwaankiisu ahaa “Magac iyo macne waa kala labo”, doorasho xor ah oo xalaal ah iyo tii musuqmaasuq iyo caddaalad-darro ku dhacdaa waa kala labo oo magaca uun
FAALLO XIISADDA REER GALBEED IYO RUUSHKA
Tiigso.com March 21, 2014 0
Iyadoo ay muddo ka soo wareegtey waayadii u adduunku u kala qaybsanaa labadii xulufo oo Nato iyo Warso. Waxaa muddo laga nastay dagaalkii qaboobaa oo wadashaqayn iyo kala faa’iideysi baa lagu baddeley, gaar ahaan
MAXAA LAGA FILan karaa bogga tiigso.com ?
Tiigso.com March 9, 2014 0
Boggaan Tiigso wuxuu siyaalo kala duwan uga qayb qaadan doonaa horay u marinta bulshada Soomaaliyeed, haddii Alle idmo. Haddaan nahay shaqaalaha Bogga Tiigso, waxaan si weyn ugu dedaali doonnaa inaan si joogto ah u